वामीको मध्य बजारमा मदुस खुल्दै, १०० भन्दा बढी परिकारको स्वाद लिन सकिने ! - Jyotinews
वामीको मध्य बजारमा मदुस खुल्दै, १०० भन्दा बढी परिकारको स्वाद लिन सकिने !
अनिश शर्मा गैरे २०७७ कार्तिक १२ गते ९:३४
गुल्मी, १२ कार्तिक ।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका ७ वामीटक्सारमा मदुस क्याफे क्लक शिघ्र सञ्चालनमा आउँदैछ । वामीका तीन युवाहरुले मिलेर वामीकै नया र विशेष खालका सेवा दिने उद्धेश्य सहित मदुस खोल्न लागेका हुन् । वामीका युवाहरु भुगोल सापकोटा, जिएम शर्मा अर्थात विवेक काफ्ले र हिमाल सापकोटा मिलेर हाल बजाज शोरुम भएकै घरमा बेकरी, मिठाईका परिकारहरु सहितको रेष्टुरेन्ट सेवा सञ्चालन गर्न लागेका हुन् । जसको लागि सेटपको काम धमाधम चलिरहेको छ ।
उनीहरुका अनुसार तिहार अघि नै भव्य समारोह सहित क्याफेको उद्घाटन गर्न लागिएको छ । वामीमा विशेष सेवा सुविधा सहितको होटल र रेष्टुरेन्ट आवश्यकता रहेकोे कुरा धेरै समय देखि औल्याइँदै आइएको छ । हालसम्म चाउमिन, ममः बाहेक त्यो भन्दा धेरै परिकारहरु वामीमा पाइदैन । तर मदुसमा भने बुटवल काठमाडौँमा पाइने परिकार र स्वादहरु पाउन सकिने सञ्चालक मध्येका एक भुगोल सापकोटाले बताए ।
“गाँउमा व्यवसाय गर्ने ठूलो इच्छा हो” उनले भने, “व्यवसाय गरेपछि केही नया गरौँ भन्ने लाग्यो, त्यसैले यो क्षेत्र अँगाल्यौँ।” उनले मदुसमा पिज्जा, बर्गर, स्प्रिङरोल, ममका विभिन्न परिकारहरु जस्तै झोल मम, सि मम, कोथे मम, कुकर कफी सहितका कफी आइटमहरु, चिज, स्याण्डविच, सुप, विरयानी, सेकुवा, लस्सी, लगायत गरी करिब १ सय प्रकारका खाद्य परिकारको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । गाँउमा आन्तरिक वा बाह्य पर्यटक आउँदा पनि तीनै ममः र चाउमिनमै चित्त बुझाउने बाध्यतालाई हटाउन खोजेको अर्का सञ्चालक जिएम शर्मा विवेकले बताए ।
नया शैलीको बेकरी
वामी तथा आसपासका क्षेत्रमा राम्रो सेवा दिने बेकरीको आवश्यकता रहेको महसुस धेरैलाई भइरकेको थियो । बेकरीको सेवा भएपनि केक बाहेक अन्य आइटमहरु पाइदैनन । तर मदुसमा महिनाको ४० हजार तलब दिएर बेकरीको मुख्य कारिगढ राखेर उनीहरुले लगानी गरेका छन् । केक बनाउने मेसिन देखी जेनेरेटर सम्मका मेसिनहरु जोडेका छन् । जहाँ डिजाइन डिजाइनका केक मात्र नभएर बेकरीका हरेक सामग्रीहरु उपलब्ध हुने अर्का सञ्चालक हिमालले बताए ।
त्यति मात्र नभएर मिठाईका परिकारहरु पनि यहाँ उपलब्ध हुने भएका छन् । एक दर्जन बढीका मिष्ठान्नहरु पनि पाइने भएका छन् ।
जसमा लड्डु, जेरीपुरी, पेडा लगायत रहेका छन् । मिठाईका परिकारको निम्ती पनि उनीहरुले छुट्टै कारिगढ राख्ने भएका छन् ।
बर्थडे सरप्राइज र होम डेलिभरी
आधुनिक समय अनुसारका बर्थडे सरप्राइज गर्न चाहनेहरुको लागि उक्त व्यवस्था मदुसले गर्ने भएको छ । आफ्ना दाजुभाई, साथीभाई आफन्तहरुको जन्मदिन, विवाह बर्षगाठ तथा अन्य खुशीयाली मनाउने दिन सरप्राइज पार्टी दिन चाहनेहरुले पनि उक्त फाइदा मदुसबाट ल्याउन सक्ने सञ्चालक भूगोलले बताए । जसको लागि मनाउने दिन भन्दा केही समय अघि नै अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्डर पछि सेलिव्रेट गर्ने दिन घरमै पुगेर सरप्राइज पार्टीको व्यवस्था मदुसले मिलाउने उनले बताए । जसमा घर वाहिर भएका ब्यक्तिहरुले आफ्ना आफन्तहरुको विशेष दिनमा सरप्राइज पार्टी दिन चाहेको खण्डमा मदुसलाई सम्पर्क गर्न सक्ने भएका छन् भने मदुसको टिमले घरमै पुगी पार्टी दिनेछन्। त्यतिमात्र नभएर मदुसमा पाइने हरेक परिकारहरुको होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ ।
छुट तथा उपहार
विद्यार्थीको आइडी कार्ड तथा स्कुल ड्रेसमा आउने विद्यार्थीहरुलाई आइतवार देखी शुक्रवार सम्म १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छन् । त्यस्तै केक काट्ने गरी जुन सुकै पार्टी सेलिव्रेट गर्न आउने अतिथिलाई मदुस क्याफे क्लकको तर्फबाट आकर्षक उपहार दिइने, तथा एक महिना भित्र ८ वटा सम्म केक किन्ने अथवा तथा आफु मार्फत किन्न लगाउनेलाई रु २०० को रिचार्ज वा नगदको व्यवस्था गरेका छन् । त्यस्तै ८ भन्दा माथि भएको खण्डमा प्रति केक ३० रुपैया थपिदै जाने मदुसले जनाएको छ ।
‘कस्टमर अफ द मन्थ ‘
एक महिना भित्रमा सबैभन्दा बढी रकमको बिल भुक्तानी गर्ने अतिथिलाई ‘मदुस कस्टमर अफ द मन्थ’ घोषणा गरि एक महिना सम्म मदुसको फेसबुक तथा क्याफेमा नाम सहित फोटो राखि सम्मान गरिने भएको छ । जसको लागि कम्तीमा १० हजार वा सो भन्दा बढी रकमको बिल भुक्तानी गरेको हुनुपर्नेछ । विल एउटै ब्यक्ति वा संस्थाको नाममा हुनुपर्नेछ । यी अफरहरु चैत मसान्त सम्म लागु हुने र त्यसपछि नया अफरहरु ल्याइने सञ्चालक जिएम शर्मा विवेकले बताए ।
वामीको तस्वीर सौजन्य : रविलाल पौडेल